Kooxda Elman oo markii ugu horeysay u laabatay horyaalka heerka labaad. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Kooxda Elman oo markii ugu horeysay u laabatay horyaalka heerka labaad.
Muqdisho…SONNA…Kooxda kubadda Cagta Elman oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ayaa maanta ka hartay horyaalka koowaad ee Dalka kadib markii ugu horeysay tan iyo markii uu dib u bilowday horyaalka Soomaaliya Dowladii dhexe ee dalka.
Qeybtii hore ee cayaarta ayaa lagu kala nastay bar bardhac 1-1, waxaana cayaarta qeybtii labaad marka la isku soo laabtay ay labada koox sameeyeen weerar iyo weerar celis oo ay labada dhinacba ku abuureen fursado dahabi ah oo ay goolal ku keeni kareen, balse ugu dambeyn Kooxda Jeenyo ayaa la timid gool taasi oo cayaarta ka dhigtay 1-2 oo ay guusha ku hogaamineysay Jeenyo.
Previous articleGeneral Biixi oo shir Guddoomiyay kulan looga hadlay ciribtirka argagixisada “SAWIRRO”
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo warbixin ka dhageystay Guddiga dib u heshiisiinta Gobolka Gedo “SAWIRRO”